नेपाली परम्परागत मौलिक गहना संकटमा - VOICE OF NEPAL
५ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०१:१६ 241 ??? ???????
नेपालमा ३० प्रतिशत महिलाले मात्रै परम्परागत मौलिक गर–गहनाको उपयोग गर्छन् । हिजो–आज मौलिक गहना संकटमा परेका छन् । विदेशी डिजाइनका गहनाले मौलिक गहनालाई विस्थापित गर्न थालेको जानकारहरु बताउँछन् ।
नेपाली मौलिक गरगहनालाई गुणस्तरयुक्त बनाई विदेश निर्यात गर्ने योजना बनाइरहँदा विदेशी डिजाइनका गरगहना बाधक बनेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । गरगहनामा नेपाली पत्थर प्रयोग गर्न र मौलिक गरगहनामा ध्यान दिनुपर्ने उनिहरुको तर्क छ ।
विश्वबजारमा नेपाली परम्परागत र मौलिक गरगहनाको माग पनि उच्च छ । तर निकासीका लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्नेमा व्यवसायीको माग छ । कच्चापदार्थको आयात, सुनको कोटामा बृद्धि र सहुलियत नपाउँदा विदेशी ब्राण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनिहरुको तर्क छ ।
अहिलेसम्म नेपालबाट विदेशमा मौलिक गरगहना निर्यात भएको एकिन तथ्यांक छैन् । विश्वबजारमा नेपाली मौलिक गरगहनालाई ब्रान्डिङ गरी निर्यात गर्न सके व्यापार घाटा घट्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
नेपालमा ३० प्रतिशत महिलाले मात्रै परम्परागत गहना लगाउने गरेको तथ्याङ्क छ । परम्परागत गहनाले नेपाली सांस्कृतिक पहिचान बोकेकाले यी गहना कहिल्यै विस्थापित नहुने उपभोक्ताहरु बताउँछन् ।
बजारमा अहिले चलेका र रुचाइएका परम्परागत गहनाहरूमा मङ्गलसूत्र, तिलहरी, नौगेडी, कण्ठमाला, बुलाकी, बाला, हेरबल, जन्तर, चुरा, शिरबन्दी छन् । नेपालमा पाइने जेम खनिजलाई उपयोगमा ल्याउने हो भने विदेशबाट आयात गरीने अर्बौं मूल्यका सुन र कच्चापदार्थमा गिरावट आउने सरकारी प्रक्षेपण छ ।